အွန်လိုင်း ငွေရှာနည်း (၃) ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Pc Game » အွန်လိုင်း ငွေရှာနည်း (၃)
Tuesday, July 30, 2013 Pc Game
ဒီဆိုက်က online မှာငွေရှာချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ငွေရှာနိုင်မဲ့ နည်းတွေထဲက တစ်နည်းဖြစ်တဲ့ PTC (pay to click) ဆိုတဲ့ နည်းကိုတင်ပြထားတာ၊ online ပေါ်မှာငွေရှာ တဲ့ ကျုပ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ အရ ငွေရှာဖွေရေး Websites တွေနဲ့ပက်သက်လာရင် အတော်များများဟာ ငလိမ်တွေဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုက်တွေဖြစ်နေတယ်၊ အလွန်နည်းပါးတဲ ဆိုက်တစ်ချို့သာလျှင် တကယ်ငွေပေးတဲ့ ဆိုက်တွေဖြစ်တယ်၊ အွန်လိုင်း ငွေရှာရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ ဘာမှမသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ တကယ်ငွေရှာ ရနိုင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်သွားဖို့ နှစ်နဲ့ချီကြာမြင့် နိုင်တယ်၊ ကျုပ်ရဲ့ မြင်တွေ့ နေကျ အတွေ့အကြုံအရပြောရရင် နောက်ဆုံး မှာ ပိုးသာကုန် မောင်ပုံစောင်းမတတ်နဲ့ ပြီးသွားမယ်၊
တကယ်စိတ်ဓါတ်ကျသွားမယ်၊တစ်ချို့က လမ်းကြောင်းရှာတွေ့ပြန်တော့လည်း အွန်လိုင်းအကောင့် မရှိလို့ (cyber-banking account) စိတ်ပျက်သွားတယ်၊ ဒါတွေအတွက်လဲ အလျင်းသင့်တဲ့ ဖြေရှင်း ချက်ကောင်ကောင်းတွေရှိပါတယ်၊ ဒီဆိုက်ကတစ်ဆင့် အခက်အခဲအားလုံးကိုဖြေရှင်းမဲ့ နည်းတွေကို ကျွန်တော် ပြောပြပေးမယ်၊ ကူညီပေးမယ်၊ ကျွန်တော်တကယ် ပိုက်ဆံရနေတဲ့၊ လက်ရှိလဲလုပ်ကိုင်နေစဲဖြစ်တဲ့ online ငွေရှာဖွေရေးအလုပ်တွေကို တင်ပြပေးသွားမှာပါ၊ ကနဦးအနေနဲ့ အလွယ်ဆုံး ငွေရှာဖွေရေးတွေကို တင်ပြပေးမယ် ၊ တစ်ဆင့်ခြင်း မြင့်တက်လာမယ်၊ နောက်ဆုံး professional ကျကျလုပ်ကိုင်ရတဲ့ သောက်သောက်လွဲဝင် ငွေရတဲ့ အလုပ်တွေ တင်ပြ၊ သင်ပြပေးသွားမယ်။
ဒီနေရာမှာ ရေးသိပ် ကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက် ပြောလိုက်ဦးမယ်၊ ကျုပ်ဘယ်တော့မှ စိတ်ကူးရင်ဆန်ပြီး အလှမ်းဝေးတဲ့ စိတ်ကူး တွေနဲ့ ခင်ဗျား တို့ရဲ့ အချိန်တွေကို ဖြုန်းမှာ မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်လစ်လပ်ဆိုပြီး ဟိုးအမေရိကား၊ အင်္ဂလန်က တွေ့ အကြုံ ဆယ်နှစ်အထက်ရှိမှရမယ့်လုပ်ငန်းတွေ တင်ပျြမှာ မဟုတ်ဘူး၊ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်တွေကို တင်ပြမှာ၊ အထူးသဖြင့် တိုးတက်ဖို့ကြိုးစားဆဲ မြန်မာ ပြည်ကလူငယ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်၊ ပညာအရည်အချင်း ဖြည့်နေဆဲမှာ ကြားပေါက်ဝင်ငွေရချင်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အထူးရည်ရွယ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အသက်အရွယ်မရွေး အတန်းအစားမရွေး လုပ်နိုင် တယ်။ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်၊ ဒီမှာတင်ပြချင်တွေ မရှင်းရင်၊ သံသရ ၀င်ရင် ကြိုက်တဲ့ အချိန် မေးလိုက်၊ ၂၄ နာရီအတွင်း အဖြေရမယ်၊ အွန်လိုင်း ငွေရှာဖွေရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ သိချင်တာရှိရင် အီးမေးကတဆင့် မေး၊ ၂၄ နာရီအတွင်းဖြေမယ်၊ အဆင့်ဆင့်တင်ပြသွာမယ်၊
ကျုပ်ရဲ့ သင်ပြမူတွေအားလုံးပြီးရင် အပိုဝင်ငွေ တစ်လသုံးသိန်း ရှာနိုင်မယ်၊ ကျုပ်အတိအကျ တွက်ပြီးတင်ပြထားတာ၊ ခင်ဗျားတို့တာ မအလုပ်ကောင်ကောင်းလုပ် ငွေရစေရမယ်၊ အခု ပထမအဆင့် အနေနဲ့ ခလုပ်နှိပ်ရင် ငွေရမယ်ဆို တဲ့ အလုပ်အကြောင်း တင်ပြမယ်၊ ဒီပထမအဆင့်မှာ အလုပ် ၃၃ ခုပါတယ်၊ များတယ်မထင်နဲ့၊ ကျုပ်ပြောခဲ့ ပြီးပြီ၊ အလွယ်ဆုံးလို့၊ လက်ချောင်း တစ်ချောင်းပါရင် အလုပ်လုပ်လို့ရပြီ၊ ခင်ဗျားတို့ ကိုတိုင်လဲအဲ့ဒီ့ ဆိုက်တွေကိုရှာလို့ရတယ်၊ online ပေါ်မှာ အဲ့ဒီ့လိုဆိုက်တွေ သိန်းနဲ့ ချီပြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်ပြောတဲ့ ဆိုက် ၃၃ ခုပဲစိတ်ချရတယ်၊ ကျုပ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်ကို တော်တော် ချင်သွား မှာပေါ့၊ မယုံရင် စမ်းကြည့်လိုက်လေ၊ ဂန့်သွားမယ်၊ ဆိုက်အများစု အသင်းဝင်ကျေးတောင်းတယ်၊ အဲ့ဒီ့ဆိုက်တွေအားလုံးငလိမ်တွေ၊ ဆိုက်တစ်ချို့ ငွေထုတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏကို ကန့်သက်ထားတယ်၊
ငွေများလာမှာထုတ်ခိုင်းတယ်၊ အဲ့ဒီ့သူတို့ ကန့်သက်ထားတဲ့ ငွေပမာဏကိုလဲရောက်ရော ခင်ဗျာငွေ တောင်းခံလွှာ (invoice) လဲပို့ရော ခင်ဗျားကို ဘယ်တော့မှ မဆက်သွယ်တော့ဘူး၊ ခင်ဗျားမှာ တစ်နေ့ပြန်စာပေါ်လာ နိုး တစ်နေ့ပေါ်လာနိုးနဲ့စောင့်နေ ရင်း ဒေါသတွေလျှိုင်လျှိုင်ထွက် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရ နဲ့ ခင်ဗျားရဲ့ သုံးလစာ အလုပ်ခ လှလှလေး ကြွသွားလိမ့်မယ်၊ မယုံမရှိနဲ့၊ တစ်လောက Voice ဂျာနယ်မျာဖတ် လိုက်ရတယ် ဘုမသိ ဘမသိ နဲ့ ငတိ တစ်ယောက် လက်ဆော့ထားတာ၊ အဲ တကယ်စေတနာ မှန် နဲ့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါါတယ်၊ နို့ပေမယ်လို့ ပြသနာက သူညွန်းတဲ့ဆိုက် က နာမည်ဆိုးထွက်နေတဲ့ ဆိုက် (scam site) ဖြစ်နေတယ်၊ အယ်ဒီတာကော စာရေးတဲ့ သူကော စေတနာ ပလပွရှိပေမဲ့ လေ့လာမူ မပြည့်သေးဘူး (ဗမာ ဂျာနယ်များ ရဲ့ အလေ့အထ)၊ ကဲကျွန်တော့ ရဲ့ တင်ပြမူစမယ်၊ လုပ်ချင်ရင်ဆက်လေ့လာ၊ မလုပ်လချင်ရင် ထွက်သွား၊
(ဆိုက်တစ်ခုချင်းစီ သေးစိတ် အကောင့် ဖွင့် နည်း၊ ဆိုက်တစ်ခုချင်း ရှိအသေးစိတ်ငွေရှာ ပုံ၊ ဆိုက်တစ်ခုချင်းဆီနှင့် မိမိ online ဘာဏ်အကောင့် ချိတ်ဆက်ပုံ၊ ဆိုက်တစ်ခုချင်းရဲ့ အချိန်ချုံ့ပုံ နဲ့ လျို့ဝှက်ချက်အချို့၊ online ဘဏ်အကောင့် ဖွင့် ပုံတို့ကို အသေးစိတ်ရေး ထားတာရှိတယ်၊ လိုအပ်ရင်လှမ်းတောင်း၊ လုပ်တတ်ရင် ကို့ပါ့ကိုလုပ်)
ဘာမှမလုပ်ခင်ဘဏ်ကဒ်အရင်ဖွင့်မယ်၊ ကျုပ်ပို့လိုက်တဲ့ e-book ထဲမှာ တဆင့်စီရှင်းပြထားတယ်၊ e-book ကိုကြည့်ပြီး တဖင့်စီလုပ်သွားပါ၊ ဘဏ်ကဒ်ဖွင့်ဖို့အောက်က ပုံကိုနှိပ်ပါ၊
၁. ဘက်ခစပီ (Buxp) ဒီဆိုက် ကိုကြိုက်တယ် ငွေပေးတိကျတယ်၊ ငွေရှာတဲ့ ပမာဏကျယ်ဝန်းတယ်၊ ဆိုက်ကို မကြည့်ပဲထားလို့ရတယ်၊ ကျုပ်တို့ကွန်ပြူတာမျက်နှာပြင်ရဲ့ တစ်လက်မခွဲ ပမာဏပဲသူ့ဝန်းဒိုးကိုထားဖို့လိုတယ်၊ ကွန်ပြူတာရဲ့ ကျန်တဲ့ဝန်းဒိုး အကျယ်ပိုင်းမှာ တခြား ကျုပ်စိတ်ပါရာလုပ်နေလို့ရတယ်၊ကြော်ငြှာ ကြည့်၍ငွေရှာခြင်း၊ ဗွီဒီယိုကြည့်၍ငွေရှာနည်း နဲ့ ဗွီဒီယို ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံ၍ငွေရှာ နည်း ဆိုပြီး ကျုပ်တို့လုပ်ဖို့ သင့်တော်တာတွေရှိတယ်၊ အခြားအခွင့်အရေးတွေရှိသေးပေမဲ့ လုပ်ဖို့မသင့်တော်ဘူး၊ မယုံရင် ကိုဘာသာလုပ်ကြည့်၊ သူ့ကို ၀င်ပြီးအကောင့် ဖွင့်ချင်ရင် အောက်က ပုံကိုနှိပ်။
၂. အင်ဆန်ထရီးရား ( Incenteria) လို့ခေါ်တယ်၊ PHP language သုံးပြီး ကျုပ်တို့ရဲ့ ၀န်းဒိုး ကိုထိန်း တယ်၊ လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့မရဘူး၊ အလုပ်လွယ်ကူလျှင်မြန်စေဖို့ လျို့ဝှက်ချက်တစ်ချို့ရှိတယ်၊ ငွေကျေးအရှုပ်အရှင်းကင်းတယ်၊ ငွေပးတိကျတယ်၊ သူ့ကိုဝင်ပြီးအကောင့်ဖွင့်ချင်ရင် အောက်က ပုံကိုနှိပ်၊
၃. ခလစ်ဆီရာ (Clixsia) incentria ဆိုက်နဲ့ ညီအစ်မ တွေ၊ အရောင်ကွဲတာကလွဲလို့အားလုံး အတူတူပဲ၊ Incentria မှာ ပြောထားတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီမှာ လုပ်၊ တစ်ထပ်ထဲပဲ၊
၄. ခလစ်ဆန့် (Clixsense) ဘာနည်းမှ သုံးပြီးလှည့်စား လို့မရဘူး၊ အလုပ်ဖြစ်ချင်ရင် သူ့ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်မှရတယ်၊ သေချာတယ်၊ တိကျတယ်၊ နာမည်ကောင်းရထားတဲ့ဆိုက်ပဲ၊ အဲ့ဒီ့ဆိုက်ကို ၀င်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၅. ကပ်ရ်ှအန်ဟတ်စ် (Cashnhits) အကြိုက်ဆုံး ဆိုက်ထဲမှာပါတယ်၊ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ဖြစ်တဲ့ အလိုလျှောက် ကြည့်တဲ့ ကန်ဏ(Autosurf ) ကတော့ အကောင်ဆုံးပဲ၊ အလိုလျှောက် ကြည့်တဲ့ အစီအစဉ်၊ ကြော်ငြှာကြည့်တဲ့အစီအစဉ်၊ ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး ကြိုက်မကြိုက် ဆုံးဖြတ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ငွေရှာနိုင်တယ်၊ အဲ့ဒီ့ဆိုက်ကို ၀င်ချင်ရင် အောက်က ပုံကိုနှိပ်၊
၆.စကားလက်ခလစ်( Scarlet-clicks) ရိုးရိုး ကြော်ငြှာ ကြည့်ငွေရှာတဲ့ဆိုက်ပါ၊ မကြည့်ပဲထားလို့ရတယ်၊ ၀န်းဒိုးသေးသေးလေးနဲ့လုပ်ထားလဲရတယ်၊ ငွေပေးတိကျတယ်၊ အကောက်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၇.နီယိုဘက်ခစ(Neobux) ပါ၊ ကြော်ငြှာ ကြည့်ငွေရှာ ဆိုက်ပါပဲ၊ ငွေပေးတိကျတယ်၊ သက်တမ်းရင့်တယ်၊ အရှုပ်အရှင်းကင်းတယ်၊ မကြည့် ပံဝင်းဒိုးသေးသေးလေးမှာပဲ ဖွင့်ထားလို့ရတယ်၊ အထူးအချက်ကတော့ PTC သုံးသူတိုင်း သူတို့ကို ကြိုက်တယ်၊ အကောက်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၈. ဝေါဒ်လင့်ခစ (wordlinx) ငွေပေးတာ အချန်မှန်တယ်၊ အရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ သူများနဲ့ မတူ တဲ့ပုံနဲ့တင်ဆက်ထားတယ်၊ ကြော်ငြှာတော့အတော်နည်းတယ်၊
၉.ဘက်မထရစ်ခစ( Bux-Matrix) ကြော်ငြှာသိပ်နည်းတယ်၊ ဈေးနှုန်းတိကျတယ်၊ ငွေပေးမှန်တယ်၊ PTC သုံးမယ်ဆုံးဖြတ်ထားရင်တော့ မလွတ်တားသင့်ဘူး၊ အကောက်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၁၀. ဒွန်ကီးမေး (Donkeymails) ရှုပ်ရှက်ခက်တယ်၊ တင်ပြမှူညံ့တယ်၊ နှောက်ယှက်တယ်၊ ရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ငွေပေးတာ ပြောင်မြောက်တယ်၊ မလွတ်နဲ့ အမိအရကိုင်ထား၊ အကောက်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၁၁. နိုးမီနီမမ် (No-minimum) ဒွန်ကီးမေးနဲ့ ညီအစ်ကို၊ ငပြောင်တွေ၊ ငွေတော့ ပေးတယ်၊ ဦးနောက်လဲစားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ လယ်ထဲကောက်စိုက်တာ နဲ့ယှဉ် ရင် မဆိုးသေးဘူး၊ အကောက်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၁၂. ဖြူးရှင်းမေး (fusionmails) ငွေပေးကောင်းတာကလွဲရင် တော်တော် မကြိုက်တဲ့ဆိုက်ပဲ၊ ဒါပေမဲ့ PTC လောကထဲ ၀င်မှတော့ ငွေပေးတာသေချာ ရင် မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းပေါ့၊ အကောက်ဖွင့်ချင်ရင်အောက်ကပုံကိုနှိပ်၊
၁၃. ဆိုက်နာမည်က Ayuwage ပါ၊ နောက်ထပ်ငွေပေးတာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပါ၊ ကြည့်ရတဲ့ ကြေငြာများသလို ပေးတဲ့ ငွေကျေးကလဲ အတော် ကောင်းပါတယ်၊ အလုပ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ လုံဝ လွတ်မထားသင့်တဲ့ ဆိုက်ပါ၊ အွန်လိုင်းမှာ အရှုပ်အရှင်း ကင်းတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပါ၊ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်၊ သူ့မှာ အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိတယ်၊ ဒါကတော့ ငွေထုတ်ရင် တစ်ခါတစ်ရံ ကြာသွားတတ်သာပါ၊ နို့ပေမဲ့ ပိုက်ဆံ မပေးတာတော့မရှိပါဘူး၊ သူ့မှာ အသင်းဝင်များလို့ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်၊ သို့ပေမဲ့ သေချာ အမှာအယွင်းမရှိလုပ်ရင်ဖြင့် အတော်ငွေရတဲ့ဆိုက်ပါ၊ အဲ့ဒီ့ဆိုက်မှာ အလုပ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အောက်ပါ ပုံကိုနှိပ်ပါမည်က Ayuwage ပါ၊ နောက်ထပ်ငွေပေးတာ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပါ၊ ကြည့်ရတဲ့ ကြေငြာများသလို ငွေကျေးကလဲ အတော် ကောင်းပါတယ်၊ အလုပ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ လုံးဝ လွတ်မထားသင့်တဲ့ ဆိုက်ပါ၊ အွန်လိုင်းမှာ အရှုပ်အရှင်း ကင်းတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုပါ၊ လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်သင့်ပါတယ်၊ သူ့မှာ အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိတယ်၊ ဒါ ကတော့ ငွေထုတ်ရင် တစ်ခါတစ်ရံ ကြာသွားတတ်သာပါ၊ နို့ပေမဲ့ ပိုက်ဆံ မပေးတာတော့မရှိပါဘူး၊သူ့မှာ အသင်းဝင်များလို့ အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးမှုရှိတယ်၊ သို့ပေမဲ့ သေချာ အမှာအယွင်းမရှိလုပ်ရင်ဖြင့် အတော်ငွေရတဲ့ဆိုက်ပါ၊ အဲ့ဒီ့ဆိုက်မှာ အလုပ်ဝင်မယ်ဆိုရင်ဖြင့်အောက်ပါ ပုံကိုနှိပ်ပါ၊
14. Bluclicks ပါ၊ အမြန်တင်လိုက်တယ်၊ ကောင်းတဲ့တစ်ခုပါပဲ
15. ဆိုက်နာမည်က Clickmy ပါ၊ တော်တော် ကောင်းတယ်
16. Bux4share ပါဒီဆိုက်ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ အတွက်အထူးအစဉ်ပြေမှာပါ၊
၁၇. Getbuxtoday ပါသူလဲ နာမည်ကောင်းရနေတဲ့ဆိုက်တွေထဲက တစ်ခုပါ၊
၁၈. ဒီတစ်ခုက တော့ GookkarmaClicks ပါ၊
၁၉. ImperialGetCash ပါ ဆိုက်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ၊
၂၀. logiPTC ပါ ကောင်းတဲ့ဆိုက်တစ်ခုပါပဲ
၂၁. ကြော်ငြာများပြီးငွေရတာများတဲ့ ဆိုက်ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twickerz ကတော့မေ့ထားလို့မရတဲ့ဆိုက်တွေထဲက တစ်ခုပါ၊
၂၂. Earnmoneytoday ပါဆိုက်ကောင်းတစ်ခုပါ
၂၃. ဒီတစ်ခုကတော့ သိပ္ပံပညာရှင် အိုင်းစတိုင်းကို အမှီပြုထားတဲ့ နာမည်နဲ့ ဆိုက်ပါ၊ သူ့ကို Einsteinbux လို့ ခေါ်ပါတယ်၊
၂၄. ဆိုက်နာမည်က ancium ပါ၊ ဆိုက်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ၊
၂၅. ဆိုက်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ Buxlevel ကိုလည်းမလွတ်သင့်ပါဘူး၊
ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ ဆိုက်တွေက ငွေနည်းနည်းချင်းဆီပဲရမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကိုလုပ်နိုင်ရင်တော့ ငွေကတစ်ဖြေးဖြေးတက်လာမှာပါ၊ တစ်လပြည့်သွားရင် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးရဲ့လစာလောက်တော့ရမှာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာကျွန်တော့ အစီအစဉ်ရဲ့ ပထမအဆင့်ပါ၊ ဒါတွေကိုလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲ ကျုပ်ဆီက တစ်ခြား တစ်ကယ်အလုပ်ဖြစ်စေမဲ့ နည်းတွေကိုလေ့လာလို့ ရပါတယ်၊ ကျုပ်ဆီမှာ ဘ၀ရပ်တည်နိုင်လောက်တဲ့ ငွေရှာဖွေနည်းတွေရှိပါတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကတော့ နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် လေ့လာမှ ရပါမယ်၊ စိတ်ဝင်စားမူရှိတယ် ဆိုရင် ကျွန်တော့ အီးမေးကတဆင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ၊ ခင်ဗျားတို့ကို တိကျတဲ့ ဖြေနဲ့လေ့လာရမဲ့ အစိတ် အပိုင်းကို သေခြာပြောပြပေးပါမယ်၊ တစ်လငွေဆယ်သိန်းလောက်ရဖို့ အတွက်တော့ နိုင်ငံခြား သွားဖို့မလိုပါဘူး၊ ခင်ဗျားမှာ သာမှန်ဦးနှောက်အဆင့်နဲ့၊ မပျင်းမရိတဲ့ စိတ်ထားလေးပဲလိုပါတယ်၊ ကျုပ်အပြည့်အ၀ကူညီပေးမယ်၊
ဘာမှမလုပ်ခင် အရင်ဦးဆုံး ဘဏ်အကောင့် အရင်ဖွင့်ဖို့လိုတယ်၊ ဒီမှာ နှိပ်၊ အဲ့ဒီ့မှာ ဘဏ်ကဒ် လုပ်ပုံရှင်း ပြထားတယ်၊